Tovolahy 01 sahabo 19 taona no voasambotry ny Polisy miasa ao amin’ny CSP Ambondromamy ny alin’ny talata hifoha alarobia faha 14 aogositra 2019 teo noho ny fitondrana rongony. Noho ny firongatry ny fiparitahan’ny zava-mahadomelina aty amin’ny faritra Betsiboka, dia manatanteraka Barrage de sécurité ny polisy aty an-toerana, entina hiadiana amin’ny fivezivezen’ireo zava-mahadomelina ireo. Tokony ho tamin’ny 01 ora maraina no nisy fiara 01 nosakanan’ny polisy teto Ambondromamy rehefa avy nahazo vaovao avy amina tsara sitrapo izy ireo mahakasika ny tovolahy 01 izay mpitatitra rongony mandeha amin’io fiara io. Rehefa nosavaina ilay fiara dia tratra tao tokoa ilay tovolahy, nosavaina avy hatrany ny entany, ka dia rongony 36 fatotra lehibe, tombanana ho milanja 10 kilao no tra-tehaka.
Lanonana 03 sosona no notanterahina teto anivon’ny Ministeran’ny Filaminam-bahoaka ny alarobia faha 14 aogositra 2019 teo, dia ny fifamindram-pitantanana teo anivon’ny DRH (Direction des Ressources Humaines), ny DPJ (Direction de la Police Judiciaire) ary ny DIGS (Direction de l’Inspection Générale des Services). Arak’izany dia voatendry ho eo amin’ny toeran’ny Directeur des Ressources Humaines ny Commissaire Divisionnaire de Police RAKOTOMAVO Roger Henri, nisolo toerana ny Contrôleur Général de Police RAJAONARISON José Andrianasolo. Voatendry ho Directeur de la Police Judiciaire ihany koa ny Commissaire Principal de Police SERALY Hercule, nisolo toerana ny Contrôleur Général de Police ANDRIANIRINA Alain Bruno. Ary voatendry ho Directeur de l’Inspection Générale des Services eto anivon’ny Ministeran’ny Filaminam-Bahoaka kosa ny Commissaire Principal de Police RANDRIANIRINA Manahy, nisolo toerana ny Commissaire Principal de Police RAKOTONDRASOA Jean de Matha.
Vao harivariva milenti-masoandro dia efa fitaintainana ny an’ny mponina amin’ny tsy fandriampahalemana eto an-tanàna. Manao ny ataony ireo mpanao sintomahery, ny herisetra amin’ny endriny samihafa, tato ho ato aza misy koa ny mpidaroka amin’ny « bare à mine ». Manao ny asany ny mpitandro ny filaminana, etsy ankilany anefa ireo jiolahy mampihorohoro ka mampametra-panontaniana ny mponina sy anairan’izy ireo ny mpitondra mba hamerenana amin’ny laoniny ny fandriampahalemana eto Sakaraha sy ny manodidina, izay manomboka miantraika amin’ny fiharian’ny mponina.
Hanomboka amin’ny alakamisy 29 aogositra amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny alakamisy 12 septambra amin'ny 5 ora tolakandro ny fametrahana ny antontan-taratasy firotsahan-kofidiana ho an'ny kandida Ben'ny tanàna sy ny lisitry ny kandida ho mpanolotsainan'ny tanàna eny anivon'ny OVEC (Organes de vérification et d'enregistrement des candidatures). Ny sabotsy 28 septambra 2019 (60 andro farafahatarany mialoha ny datim-pifidianana) no hamoahana ny lisitr'ireo toerana hametrahana ny birao fandatsaham-bato araka ny fanapahana horaisin'ny CENI. Ny alatsinainy 28 oktobra 2019 (30 andro mialoha ny datim-pifidianana) no hampahafantarana an'ny besinimaro ny toerana sy ny firafitry ny SRMV (Section chargée du recensement matériel des votes) araka ny fanapahana horaisin'ny CENI. Ny alatsinainy 28 oktobra 2019 no hanendrena ireo mpikambana amin'ny birao fandatsaham-bato hataon'ny CENI.
Tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny governemanta ny 14 Aogositra 2019 fa dia hotontosaina ny 27 novambra 2019 ny fifidianana Ben'ny tanàna sy ny mpanolotsainan'ny tanàna manerana ny Nosy, araka ny tolokevitra avy any amin'ny Vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana (CENI). Didim-panjakana telo no noraisina mba handrindrana ny fanatanterahana ny fifidianana, dia ny Didim-panjakana manaika ny mpifidy ho an'ny fifidianana Ben'ny tanàna sy ny mpanolotsainan'ny tanàna ho an'ireo Kaominina rehetra, na ambonivohitra na ambanivohitra, manerana ny Nosy. Didim-panjakana mamaritra ny fomba hanatanterahana ny fifidianana Ben'ny tanàna sy ny mpanolotsainan'ny tanàna ho an'ireo Kaominina rehetra, na ambonivohitra na ambanivohitra, manerana ny Nosy. Ary ny Didim-panjakana mamaritra ny fandraisana anjara ara-bolan'ireo kandida sy ny lisitry ny kandida amin'ny saram-panontana ny biletàm-pifidianana amin'ny fifidianana Ben'ny tanàna sy ny mpanolotsainan'ny tanàna ho an'ireo Kaominina rehetra, na ambonivohitra na ambanivohitra, manerana ny Nosy. Mamaritra koa ny fomba famerenana io fandraisana anjara io ho an'ireo kandida mahafeno ny fepetra.
Lehilahy 01, sahabo 27 taona no notanan’ny Polisy misahana manokana ny lozam-pifamoivoizana (BAC) ny zoma faha 09 aogositra teo, rehefa avy nandona sarety maromaro teny amin’ny Fasan-karana ka nahafatesana olona 01. Ny alarobia faha 07 aogositra 2019 tokony ho tamin’ny 12 ora sasany alina no nitrangan’ity lozam-pifamoivoizana ity teo amin’ny Fasan-karana. Kamiao 01 avy any Vontovorona ka nentin’ny mpamily haterina any amin’ny orinasa iasany eny By-Pass no nifanena tampoka tamina fiara hafa. Tsy nahatana ny familiana ilay mpamily kamiao ka nifatratra tamina sarety miisa 06 nipetraka teo amoron-dalana. Lasa nandositra avy hatrany moa ity kamiao ity rehefa avy nandona ireo sarety ireo. Fotoana fohy taty aorina dia tonga teny an-toerana ny Polisy nizaha ny zava-nitranga. Tamin’izany no nahitana ny vata mangatsiakana lehilahy 01 tao anatin’ny iray tamin’ireo sarety ireo.
Hentitra ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina androany nandritra ny filankevitry ny minisitra. Mitaky « Asa– Fahamatorana – Fandraisana andraikitra » ny tenany. Mikasika ny fandrafetana ny volavolan-teti-bola taona 2020 dia nanome toromarika mazava ny tenany, fa mila arafitra mifandraika amin’ny filan’ny vahoaka sy ny toe-javamisy isaky ny faritra izany. Mila ampitomboina ny fandaniam-bola ara-tsosialy, mila ampitomboina ny famatsiambola natokana ho amin’ny fampiroboroboana ny fambolena, hoy ny filoha, ampifanarahana tsara amin’ny filan’ny vahoaka sy ny tanjona nanaovany velirano tamin’ny vahoaka Malagasy.